Xiriirka kubada cagta dalka Spain oo war rasmi ah kasoo saaray heshiiska Real Madrid ay la gaartay Julen Lopetegui – Gool FM
(Real Madrid) 12 Juunyo 2018. Real Madrid ayaa dhawaan si rasmi ah ugu dhawaaqday in macalinka xulka qaranka Spain Julen Lopetegui inuu yahay badalka Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid. Kadib marka uu soo dhameysto koobka aduunka ee 2018
Xiriirka kubada cagta ee dalka Spain ayaa war rasmi ah ay arintan kasoo saareen waxay ku sheegeen in Real Madrid ay bixisay qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa xulka La Rojo si ay u shesho adeegiisa kadib koobka aduunka ee 2018 ka dhici doono dalka Russia.
Real Madrid ayaa siin doonta 2 milyan euro xiriirka kubada cagta ee dalka Spain, waana qiimaha lagu kansali karo heshiiska Julen Lopetegui kaasoo isbuucyadii lasoo dhaafay cusbooneesiiyay heshiis gaaraya ilaa iyo 2020-ka.
Sida warbixintan lagu sheegay Julen Lopetegui ayaa ka soo muuqan doona shir jaraa’id oo uu madaxweynaha xiriirka kubada cagta Spain ku wehlin doono bari oo Arbaco ah saacadu markay tahay 11:30 barqonimo.
Tababaraha reer Spain ayaa saxiixi doona heshiis seddex sano ah si uu u noqdo badalka macalinka reer France ee Zinedine Zidane, kaasoo is casilay ka dib laba xilli iyo bar uu soo maamulay Los Blancos.